Thursday October 18, 2018 - 08:10:02 in Wararka by Super Admin
Boqolaal katirsan ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ayaa saaka aroortii hore xiray waddooyinka Makka Al Mukarrama iyo Wadnaha oo muhiim u ah isku socodka malaayiin shacab ah oo kunool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Waddooyinka waxaa loo xiray wufuud ka socotay dowladaha Itoobiya iyo Ereteria oo oo maanta barqadii soo gaaray magaalada Muqdisho, kumanaan shacab ah oo waayay gaadiid ay ku tagaan goobaha shaqada iyo waxbarashada ayaa la arkayay iyagoo waddooyinka Jidcadayaasha ah ku lugeynaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Ereteria Cusmaan Saalax iyo Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Workeneh ayaa kulamo laleh madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka.
War kasoo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in socdaalka wufuuddan uu gogol xaar u yahay Booqasho ay bishan gudaheeda Muqdisho ku imaan doonaan Madaxda dowladaha Itoobiya iyo Ereteria balse ma sheegin waxa ay booqashadaasi ku saabsantahay.
Bishii Shawwaal ee lasoo dhaafay ayuu R/wasaaraha Itoobiya booqasho gaaban ku yimid Muqdisho xilligaas oo Max'med Cabdullaahi Farmaajo uu Itoobiya usaxiixay heshiis dhigayay in ay la wareegi karto Afar dekadood oo kuyaal dalka Soomaaliya waxaana dekadahaas dhisaysa shirkad laga leeyahay wadanka isku tagga Imaaraatka Carabta.
R/Wasaarihii lubnaan iyo Xubnihiisi golaha Wasiirrada oo iscasilaad ku dhawaaqay.